PressReader - Isolezwe: 2018-02-14 - Siyabadinga othisha abanobizo njengoNkk Masuku
Siyabadinga othisha abanobizo njengoNkk Masuku
Isolezwe - 2018-02-14 - IMIBONO -
KUNINGI okubi okuke kubikwe ngothisha esikhathini samanje nokunesandla ekutheni behlelwe yisithunzi njengoba bengasahlonishwa njengakuqala.
Le mibiko igcina isigqibe okuhle okwenziwa ngabanye othisha njengoba bebaningi abenza okuhle, abawuhloniphayo umsebenzi wabo futhi abasazinikele kuwona.
Lokhu kuphinde kwagqama odabeni esilushicilele ngeledlule ngoNkk Balungile Masuku onikele ngezincwadi zokufundisa ngomnotho wasolwandle, iMaritime Economics, nokuyincwadi engekho ezikoleni.
UNkk Masuku, owayefundisa eSithengile High eClermont, unikelele uMnyango wezeMfundo ngezincwadi zalesi sifundo ezingu-1 500. Nakuba engaseyena uthisha kodwa akakhohliwe yizinselelo ayebhekana nazo esafundisa njengoba kwaba nguye uthisha wokuqala eSithengile High ukufundisa iMaritime Economics. Le ncwadi ebhalwe nguye ngeyesithathu, eyokuqala wayibhala ngo-2015. Ngesikhathi eqala ukufundisa lesi sifundo wayengenasicucu salo mkhakha kodwa wayezihlupha ngokuthola ulwazi ngoba efuna ukuthi uma esemi phambi kwabafundi kungaveli ukuthi akayifundelanga into ayifundisayo.
Uma kukhulunywa ngokuzinikela kushiwo into efana nalena eyenziwa nguNkk Masuku. Omunye umuntu wayengasonga izandla, abheke umnyango ukuthi umnike izinsiza kusebenza kodwa yena wazihlupha ngoba efuna abafundi bakhe basizakale. Nakuba esefunde wagogoda ngalo mkhakha njengoba eseneMaster’s Degree kwiMaritime usaqhubeka nokucabangela abafundi njengoba lolo lwazi elusebenzisa ezincwadini azibhalela izikole.
Namhlanje kunabantu asebesebenza kulo mkhakha uthando lwawo olwatshaleka befundiswa nguNkk Masuku. Kuyancomeka akwenzayo ngoba lolu hlobo lothisha yilona oluzokwenza ukuthi izikole zabamnyama zikhiqize abafundi abasezingeni, abaphasa ngamalengiso futhi abangakunqeni nokufundela imikhakha engajwayelekile namakhono adingekayo ezweni.
Sengathi uMnyango wezeMfundo ungababhekisisa abantu abafana noNkk Masuku, ubakhuthaze, ubeseke futhi uzame ngakho konke ukuthi bangaphunyuki bawushiye lo mkhakha njengoba kwenzekile kuNkk Masuku.